Vaovao - Ny fanaovana satroka dia toetra
Tao amin'ny hazakazaka Margaret Howell lohataona / fahavaratra 2020, dia nahita pataloha fotsy lava mifono fotsy izahay, lobaka vita amin'ny voasarimakirana sy turquoise be loatra, parka maivana ary akanjo vita amin'ny boaty. Angamba izany ny toe-po, fa ny ba kiraro teo ambonin 'ny pataloha kosa tsy dia ratsy tarehy loatra. Maro tamin'izy ireo no nanao voanjo Flaxsatroka Izany dia nilaza fa nisy zavatra diso tsaramaso satroka miloko marevaka miloko ary neon mamiratra.
Ilay tsaramaso satroka, izay mifikitra mafy eraky ny loha toy ny bandy, dia tsy endrika vaovao ho an'ny mpanjono na ny akademia, fa ho toy ny fitaovana "rendrarendra", dia naseho ho an'ny lahy sy ny vavy, na ririnina na fahavaratra. miaraka amin'ny pataloha jeans efa tonta na akanjo ba efa niasa, ankehitriny dia anaovana kardigans vita amin'ny tànana na palitao famoronana. Tsy mahita zavatra tsy mety amin'izany i Howell; ny satroka, toy ny kiraro, dia mametraka ny akanjo ho an'ny akanjo iray, hoy izy.
Ny fikarohana satroka beanie dia nisondrotra nandritra ny taona lasa mba ho lasa iray amin'ireo satroka malaza indrindra, ary tsy manana ny haben'ny olana manelingelina olona maro izy ireo. Ny satroka beanie mena miaraka amina silhouette sy hoodies dia nanjary fomban'ny fomba an-dalambe. ny logo sy ny fironana lamaody matotra dia manome lalana ny fanjairana tsy voafehy sy ny tsy fifehezana, ny akanjo tsy mankaleo intsony fa ny lamba lamba ho an'ny fihetsiky ny tsirairay, ary ny satroka beanie miaraka amin'ny akanjo dia mahatsapa ho toy ny palitao Armani '80 miaraka amin'ny akanjo ba fa tsy lobaka sy mamatotra.
Tsy ny satroka beanie ihany, fa ny fomban'ny Chanel's School Girl, izay manome voninahitra sarimihetsika vaovao onja, dia misy koa satroka misavoana miaraka amin'ny corm mivadika. Ny sarimihetsika New Wave dia manolotra fomba fijery tsy manam-paharoa sy maharitra an'ny vehivavy frantsay - ilay jerena anaty volo pixie, eyeliner maranitra, voninkazo mena lehibe amin'ny molotra satroka, na manao fehiloha Brittany sy akanjo lava. Mino ny mpitsikera lamaody fa 2021 Ity dia taona ho an'ny kojakoja, miaraka amin'ireo lalamby any New York, Londres, Milan ary Paris anjakan'ny sombin-javatra ampiasaina izay afaka miditra amin'ny vanim-potoana fitafiana aorian'ny vanim-potoana. Izy io koa dia fomba tsara iray hitazonana ny fitafianao haharitra nefa tsy raikitra ao anaty fotaka. Rehefa dinihina tokoa, ny kojakoja, toy ny "akanjo malefaka" dia afaka mamorona fifangaroan'ny toe-po sy ny fomba.
Tamin'ny taonjato faha-19 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20, ny satroka dia nitafy ny sokajin'olona rehetra, anisan'izany ny any amin'ny ambaratonga ambany indrindra.Hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa, noheverina fa tsy mety raha tsy manao satroka ny tovolahy iray. manankarena toetra sy fikambanana ara-tantara. Ny satroka bowler, na satroka Derby, dia miendrika vilany crock mivadika ary nantsoina tamin'ny earl britanika taonjato faha-19 izay nametraka ny fomba. Fedora, nomena anarana taorian'ny filalaovana io anarana io ihany, dia satroka malefaka misy tampony boribory ary feno molotra azo vodin-drano. Tian'ny lehilahy izy io, tsy vitan'ny miaro amin'ny orana, fa azo aforitra ary hapetraka ao anaty kitapo. lehilahy ao “Casablanca” ho an'ny mpanao famotopotorana manokana any “Ilay Torimaso Be”, mandehandeha eny amin'ny araben'i New York mifono palitao lava izy ireo ary mitafy Fedora mainty sy fotsy.
Peter Mayer, mpanoratra, indray mandeha dia nihevitra fa lamaody sy kanto ny satroka ho an'ny lehilahy, ary nilaza zavatra momba ny toetran'ny olona iray izy. "Ny satroka matetika dia marika famantarana ny olona iray toa ny orona amin'ny endrik'olona," hoy izy nanoratra tao amin'ny About Taste.
Amin'ny " Tsara maraina Britain" Tamin'ny taon-dasa, nanome fanomezana an'i Trump ny mpampiantrano - satrom-piangonana Churchillian - ho vahininy. Niteraka korontana an-tserasera ny fiasan'ny satrok'i Trump, hita fa tamin'ny ambaratonga hafa noho ny resabe niampangana azy noho ny volon-dohany.
Ny sigara, ny tsorakazo an-tongotra, ny fatorana an-tsipìka ary ny fitafiana nilomanosana iray dia fitafian'i Churchill avokoa, ary ny karazana satroka saro-kenatra dia nanome fety wildista tamin'ny taona 1920. Nikorontana vetivety i Churchill ary nanoratra tao amin'ny lahatsoratra iray: "Ny iray amin'ireo endrika tena ilaina amin'ny Ny fitaovan'ny mpiasam-panjakana dia marika miavaka izay ianaran'ny olona rehetra tadiavina sy ekena. Ny volon-tratran'i Disraeli, ny vozon'akanjo Gladstone, ny volombavan'ny Lord Randolph Churchill, ny solomaso Chamberlain, ny fantson'i Baldwin - ireo 'fananana' ireo dia zava-dehibe daholo. Tsy manana an'ireny marika ireny aho, koa namorona angano momba ny satroko ireo mpanao sariitatra mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahana. "
Ny angano, hoy ny fanazavany, dia nanomboka nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny 1910 tany Southport nandeha amoron-dranomasina niaraka tamin'ny vadiny izy. "Satroka kely nahatsapa - tsy haiko hoe avy aiza izy io - efa tao anaty valiziko. Nandry teo ambony latabatra tao amin'ny efitrano izy, ary nitafy azy aho nefa tsy nieritreritra. Rehefa niverina avy teny an-tongotra izahay dia tonga ilay mpaka sary ary naka sary izy. Nanomboka teo, ireo mpanao sariitatra sy mpanao gazety dia niady hevitra momba ny satroko: firy, Tena izy ireo; endrika hafahafa ny endrik'izy ireo; Maninona aho no manova ny satroko; ohatrinona no manome lanja azy ireo sns. Betsaka ny banga, ary mifototra amin'ny sary izany."
Fa i Peter, mpahay tantaram-piainan'i Churchill Mendelssohn dia mino fa tsy marina ny tantaran'i Churchill. I Churchill, izay nahay tamin'ny fampielezan-kevitra, dia tsy afaka nahatsikaritra ny maha samy hafa ny satrony sy ny an'ny olon-drehetra. Nanandrana fomba maro i Churchill, nanomboka tamin'ny satroka ambony ka hatramin'ny satroka bowler, izay malaza indrindra amin'izany Ny satroka Humboldt, na satroka burger. Ny satroka Humboldt dia karazana satroka volon'ondry misy rantsana tahaka ny rantsan-tànana eo an-tampony, ny molony curling ary ny satin ribana eo afovoany. Nahitan'i King Edward VII tamin'ny teny alemanina izy io Tanànan'i Bad Homeburg tamin'ny taona 1880 ary niverina tany Angletera. Tao Christchill dia nanana ny ankamaroan'ireo satroka ireo, nanomboka tamin'ny mainty klasika ka hatramin'ny volondavenona somary lamaody misy fehin-kibo mainty, ao anatin'izany ny satroka Humboldt izay amidy 11.775 dolara tamin'ny lavanty tamin'ny 1991 ary nanana volamena embossment ny voaloham-bokatra Churchill ao anatiny.
John F. Kennedy, miaraka amin'ny volony vaovao sy maoderina ary loha be volo izay tsy dia rakotra, afa-tsy amin'ny tranga tsy fahita, dia satroka satrokaer. Fa ny lalàna mifehy ny vehivavy voalohany dia tsy mitovy, indrindra amin'ny besinimaro. Ao amin'ny fikarohana Google, "Jacqueline Kennedy's Hat" dia safidy tsy miankina, izay manondro Hat kely boribory somary fisaka ambony sy vatana malemy ary tsy feno molotra, satria toa a Pillbox. Fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Pillbox Hat, izay nalaina avy tamin'ny satron'ny miaramila. Ny zava-nitranga tamin'ny 20 Janoary 1961, dia noraketina an-tsoratra tamim-pitandremana, satria i Kennedy no filoha amerikana voalohany teraka tamin'ny taonjato faha-20 izay nanao lahateny voalohany tamin'ny fahitalavitra miloko.
Saingy tsy ny zavatra rehetra no nandeha nifanaraka tamin'ny drafitra. Nandritra ny alina, lanezy valo santimetatra no nilatsaka tany Washington, DC, ary tamin'ny hatsiaka ny andro ny ampitso dia nanao palitao mink matevina daholo ny olo-manan-kaja hafa, afa-tsy i Jacqueline. Ny volony manokana no namolavola palitao volon'ondry tsotra ho azy, ary nanoratra azy io izy miaraka amina satroka bowler kely mamelombelona. Tsy vanim-potoana voafaritra tamin'ny asan'ny politikan'i Jackie sy ny endriny manokana io, nefa izy io koa dia nanjary iray amin'ireo fijery malaza indrindra teo amin'ny tantaran'ny filoha voalohany..
Jacqueline koa dia nolazaina fa tsy tia satroka satria heveriny ho lehibe loatra ny lohany. Niasa nandritra ny ora lavalava i Halston, mpamolavola ny satroka, talohan'ny nanolorany an'i Jacqueline, napetrany teo an-dohany ihany, nipetraka teo anelanelan'ny fitaratra aloha sy aoriana , ary navadibadika niverimberina mba hahazoana antoka fa tonga lafatra izy io tamin'ny lafiny rehetra. Rivotra be i Jacqueline naninjitra ny tanany ary nametaka ny satrony, namela dity marivo tsy hitan'ny olona iray tao aminy, fa niely erak'izao tontolo izao, avy amin'ny fiarahamonina ambony ka hatrany amin'ny afovoan-tany afovoan-tany. "Izay rehetra naka tahaka ny endrik'izy ireo dia namela satroka tamin'ny satroka," hoy i Halston taty aoriana nihomehy.
Tamin'ny andro namonoana an'i JFK, Jacqueline dia nisaron-doha saron-dambam-boninkazo mavokely, ary nohidiana tao amin'ny National Archives any Maryland ary notafiana mba tsy ho hitan'ny besinimaro hatramin'ny 2103, ary ny satroka dia tsy hita intsony.
Tamin'ny taona 1970, niaraka tamin'ny fahatongavan'ireo mpanao volo, nanjary lamaody kokoa ny volo noho ny satroka. Niandalana, teknikan'ny fanaovan-tsatroka tamin'ny taonjato faha-19 toy ny fanjairana satroka mololo sy ny famaohana ny satroka rehetra fa nanjavona tao amin'ny atrikasa ahafahana manao satroka vita tanana. Ny fangatahan'ny tsena dia nametraka satroka ho toy ny fitaovana fialamboly fa tsy amin'ny fotoana manokana fotsiny. Ny tsenan'ny satroka dia mitentina $ 15bn isan-taona, hoy i Euromonitor, orinasam-pikarohana eny an-tsena - ampahany amin'ny tsenan-tanana manerantany $ 52bn. Fa na izany aza ivelan'ny renivohitra lamaody mavitrika dia mitombo ny fangatahana satroka.
"Nanjary endrika fanehoankevitra vaovao io, karazana tatoazy vaovao amin'ny fomba iray." Araka ny filazan'ilay mpamorona Priscilla Royer, "ny satroka dia afaka manova ny silhouette an'ny olona iray, na dia ny fihetsika aza, amin'ny fomba tsotra indrindra." Liana amin'ny maoderina i Royer Ny satroka dia manandrana manapaka ny fahatsapana ny fombafomba izay tsapan'ny satroka tamin'ny filaharam-piaraha-monina. tao anaty kitapo, avy eo nanana hevitra sahy izy. Ahoana ny amin'ny satroka fa tsy elo? Avy amin'ny famolavolana ny silhouette ka hatramin'ny fisafidianana ny fitaovana hanaovana azy, dia liana amin'ny fanaovana tiara izy. "Amin'ny sosiolojia, mahavariana ny heriny."